FARITRA BOENY : Efa-toko ireo karazana tranga mateti-piseho izay tantanin’ny Bngrc
Ny rivo-doza, ny ranobe, ny doro ala na tanety ary ny valan’aretina, hoy ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary no tranga hita matetika miseho aty amin’ny Faritra Boeny. 14 novembre 2017
Izany no nahatonga ny Bngrc foibe nanao dinika nifanakalozana tamin’ireo solontenam-panjakana any anivon’ny distrika sy ny kaominina 46 mandrafitra ny Faritra Boeny. Ka tao amin’ny restaurant Les roches rouge no nanatanteraha izany, nandritra ny hateloana izay nofaranana ny zoma 10 novambra lasa teo. Fisorohana mialoha ny fotoana sy fiatrehana ary ny fitantanana ny loza aorian’ny voina no anjara andraikitr’ity birao nasionaly miahy ity dia ny Bngrc, fa ny rehetra dia samy tompon’andraikitra zato isan-jato ny fiarovana ny aina sy ny manodidina azy, hoy ny jeneraly Rambolarson, tale mpanatanteraka mpanampy ao amin’ity Bngrc ity. Ny fampitoviana ny fahalalana ankapobeny sy ny fanatsarana ilay paikady no nifantohan’ireo mpizaika sy ny mpampiofana, ka ny Unicef no namatsy vola izany, raha ny minisiteran’ ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no tompon’antoka tamin’izao atrikasa izao.
Faritra fahaenina teto Madagasikara nanatanterahan’ny Bngrc io dinika ambany tafon-trano io ny teto Boeny. Hatolotra amin’ity faran’ny volana novambra ity kosa ireo fitaovana izay efa eto Mahajanga avy amin’ny mpiara-miombon’antoka ka ny Filohan’ny Repoblika no ho tonga hanatanteraka io tolotra io, hoy ny lehiben’ny faritra.
Fa notsindriana manokana tamin’ity atrikasa natao ity ny lafiny serasera izay miantoka ny ampahany betsaka amin’ity fiahiana ny loza voajanahary ity noho izy mampahalala ireo vaovao sy ny tsara ho fantatra momba izany ara-potoana.
Ny amisavisana ny ratsy tokoa no hiavian’ny soa, moa izay tsara fiomanana tsy hotampohin’ny loza ka izay no anton’izao fiomanana mialoha ny maitso ahitra izao.